Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): November 2018
The Different Between China & Ethnic Armed Organizations. Myiwa & KIA/KIO
at 11/06/2018 09:53:00 AM
Part (1-5) Rhohingya & Kachin Issues. Why the World Only Knew about Rhohingya Issues Not Kachin? Mungkan gaw hpa majaw Rhohinya Issues hpe sha mu mada ma ai rai kun? Hpa majaw anhte Kachin niatsin yam hpe mungkan gaw n chye ma ai rai kun? Madat yu ga. Sr. Mangshang Yaw Bawm, Interviewed By Gam Htun. #kachinlifestories #kachin part 1 Part2Part3Part4- Part 5
at 11/05/2018 08:06:00 PM
Myu Tsaw Shagan sharedapost.
Published by Hugawng Kachin ·3mins ·
ကောင်းကင်ယံထက်ဝဲပျံရင်း ဂျင်နိုဆိုဒ်ကိုတိုက်ဖျက်သူ အပိုင်း - ၁
ကောင်းကင်ယံထက်ဝဲပျံရင်း ဂျင်နိုဆိုဒ်ကိုတိုက်ဖျက်သူ အပိုင်း - ၂
Published by Hugawng Kachin ·4mins ·
October 16 at 7:06 AM
ကောင်းကင်ယံထက်ဝဲပျံရင်း ဂျင်နိုဆိုဒ်ကိုတိုက်ဖျက်သူ အပိုင်း - ၃
ကောင်းကင်ယံထက်ဝဲပျံရင်း ဂျင်နိုဆိုဒ်ကိုတိုက်ဖျက်သူ အပိုင်း - ၄
Published by Hugawng Kachin ·5mins ·
ကောင်းကင်ယံထက်ဝဲပျံရင်း ဂျင်နိုဆိုဒ်ကိုတိုက်ဖျက်သူ အပိုင်း - ၅
Published by Hugawng Kachin ·6mins ·
ကောင်းကင်ယံထက်ဝဲပျံရင်း ဂျင်နိုဆိုဒ်ကိုတိုက်ဖျက်သူ အပိုင်း - ၇
( ခ ) အထောက်အထားများကိုေ...
October 21 at 6:25 AM
ကောင်းကင်ယံထက်ဝဲပျံရင်း ဂျင်နိုဆိုဒ်ကိုတိုက်ဖျက်သူ အပိုင်း - ၈
Published by Hugawng Kachin ·7mins ·
October 22 at 5:11 AM
ကောင်းကင်ယံထက်ဝဲပျံရင်း ဂျင်နိုဆိုဒ်ကိုတိုက်ဖျက်သူ အပိုင်း - ၉
( င ) ပစ်မှတ်ထားသုတ်သင်ြ...
October 23 at 6:34 AM
ကောင်းကင်ယံထက်ဝဲပျံရင်း ဂျင်နိုဆိုဒ်ကိုတိုက်ဖျက်သူ အပိုင်း - ၁၀
( စ ) မုဒိန်းမှုကျူးလွန်...
Published by Hugawng Kachin · 8 mins ·
October 24 at 7:24 AM
ကောင်းကင်ယံထက်ဝဲပျံရင်း ဂျင်နိုဆိုဒ်ကိုတိုက်ဖျက်သူ အပိုင်း - ၁၁
( ည ) ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အဂတ...
ကောင်းကင်ယံထက်ဝဲပျံရင်း ဂျင်နိုဆိုဒ်ကိုတိုက်ဖျက်သူ အပိုင်း - ၁၂
October 26 at 5:58 AM
ကောင်းကင်ယံထက်ဝဲပျံရင်း ဂျင်နိုဆိုဒ်ကိုတိုက်ဖျက်သူ အပိုင်း - ၁၃
ဗိုလ်ချုပ်ကလခ်၏ ဂီယာ တင...
Published by Hugawng Kachin ·9mins ·
October 27 at 6:20 AM
ကောင်းကင်ယံထက်ဝဲပျံရင်း ဂျင်နိုဆိုဒ်ကိုတိုက်ဖျက်သူ အပိုင်း - ၁၄
ဗိုလ်ချုပ်ကလခ် ၏ စီးချင...
Published by Hugawng Kachin · 10 mins ·
October 28 at 6:47 AM
ကောင်းကင်ယံထက်ဝဲပျံရင်း ဂျင်နိုဆိုဒ်ကိုတိုက်ဖျက်သူ အပိုင်း - ၁၅
October 29 at 8:02 AM
ကောင်းကင်ယံထက်ဝဲပျံရင်း ဂျင်နိုဆိုဒ်ကိုတိုက်ဖျက်သူ အပိုင်း - ၁၆
Published by Hugawng Kachin · 11 mins ·
October 30 at 7:52 AM
ကောင်းကင်ယံထက်ဝဲပျံရင်း ဂျင်နိုဆိုဒ်ကိုတိုက်ဖျက်သူ အပိုင်း - ၁၇
Published by Hugawng Kachin · 12 mins ·
ကောင်းကင်ယံထက်ဝဲပျံရင်း ဂျင်နိုဆိုဒ်ကိုတိုက်ဖျက်သူ အပိုင်း - ၁၈
November 1 at 5:17 AM
ကောင်းကင်ယံထက်ဝဲပျံရင်း ဂျင်နိုဆိုဒ်ကိုတိုက်ဖျက်သူ အပိုင်း - ၁၉
Published by Hugawng Kachin · 13 mins ·
ကောင်းကင်ယံထက်ဝဲပျံရင်း ဂျင်နိုဆိုဒ်ကိုတိုက်ဖျက်သူ အပိုင်း - ၂၁
ကောင်းကင်ယံထက်ဝဲပျံရင်း ဂျင်နိုဆိုဒ်ကိုတိုက်ဖျက်သူ အပိုင်း - ၂၂
Published by Hugawng Kachin · 14 mins ·
ကောင်းကင်ယံထက်ဝဲပျံရင်း ဂျင်နိုဆိုဒ်ကိုတိုက်ဖျက်သူ အပိုင်း - ၂၃
ကောင်းကင်ယံထက်ဝဲပျံရင်း ဂျင်နိုဆိုဒ်ကိုတိုက်ဖျက်သူ အပိုင်း - ၂၀
The Different Between China & Ethnic Armed Organiz...